မန္တလေးမြို့နှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့မှ FTTx Customer များအတွက် အရမ်းကိုတန်တဲ့ Promotion
မန္တလေး နဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့တို့မှာ YTP ရဲ့ FTTX (Fiber To The Home) စတင် အသုံးပြုမယ့် Customer များကို နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာလ အတွက် Promotion Plan နှစ်မျိုး ပေးထားပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ ကြိုတင်ငွေ ၆လစာ ပေးသွင်းသူများအတွက် ကနဦး တပ်ဆင်ခကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ လစဉ်ကြေး အများဆုံး (၄၅) ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ၁၂ လစာ ပေးသွင်းမယ့် Customer များအတွက် တပ်ဆင်ခ ပေးဆောင်ရန် မလိုတော့ဘဲ လစဉ်ကြေး အများဆုံး (၄၅) ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး လစဉ်ကြေး ဘေလ်များကို KBZ Online Banking အသုံးပြုပြီး အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ပေးချေနိုင်ပါသည်။
1 Mbps - (Normal) 60,000 MMK - (35% Discount ) 39,000 MMK
2 Mbps - (Normal) 100,000 MMK - (45% Discount ) 55,000 MMK
4 Mbps - (Normal) 180,000 MMK - (45% Discount ) 99,000 MMK
Sales : 09 966 286 552, 09 966 286 553, 09 966 286 554
YTP ရဲ့ FTTx ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲလျက် ရှိသော Customer များအတွက် အထူး သတင်းကောင်း
YTP ရဲ့ လက်ရှိ Customer များအတွက် လစဉ်ကြေး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း (25% Discount) လျှော့ပေးတဲ့ ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်ကို ကျွန်တော်တို့ ပြောပြပေးပါမယ်။
FTTx အင်တာနက်လိုင်း အသုံးပြုလျက် ရှိတဲ့ Customer များအနေနဲ့ ၃လစာ ကြိုတင်ငွေ သွင်းလိုက်တာနဲ့ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း (15%) ၆လစာ (သို့မဟုတ်) ၁၂လစာ ကြိုတင်ငွေ သွင်းလိုက်ရုံနဲ့ လစဉ်ကြေးပေါ်တွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း (25%) လျှော့ပေးတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လစဉ်ကြေး ကြိုတင် သွင်းထားပြီးသော Customer များကိုလဲ ယခု နိုဝင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့မှ စပြီး လက်ကျန်ပေါ်မှာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း (25%) ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
November နှင့် December လအတွက် အထူး အစီအစဉ်
YTP ၏ FTTX (Fiber To The Home) ဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန် မန္တလေး နှင့် ပြင်ဦးလွင် မြို့တို့မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Fiber Internet ဖြစ်သည့်အတွက် YouTube မှာ ရုပ်ရှင် ကြည့်ချင်လို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အွန်လိုင်းဂိမ်း ဆော့ချင်လို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် Social Network တွေ အသုံးပြုချင်လို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုင်းဆွဲအား အကောင်းဆုံးနဲ့ အတည်ငြိမ်ဆုံး ဖြစ်နေမှာပါ။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း စတင်အသုံးပြုမယ့် Customer များအတွက် နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာလ အတွက် Promotion Plan နှစ်မျိုး ပေးထားပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ ကြိုတင်ငွေ ၆လစာ ပေးသွင်းသူများအတွက် ကနဦး တပ်ဆင်ခကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ လစဉ်ကြေး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ၁၂ လစာ ပေးသွင်းမယ့် Customer များအတွက် တပ်ဆင်ခ ပေးဆောင်ရန် မလိုတော့ဘဲ လစဉ်ကြေး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး လစဉ်ကြေး ဘေလ်များကို KBZ Online Banking အသုံးပြုပြီး အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ပေးချေနိုင်ပါတယ်။
1 Mbps - (Normal) 60,000 MMK - (25% Discount ) 45,000 MMK
2 Mbps - (Normal) 100,000 MMK - (25% Discount ) 75,000 MMK
4 Mbps - (Normal) 180,000 MMK - (25% Discount ) 135,000 MMK
6 Mbps - (Normal) 264,000 MMK - (25% Discount ) 198,000 MMK
8 Mbps - (Normal) 330,000 MMK - (25% Discount ) 247,000 MMK
10 Mbps - (Normal) 400,000 MMK - (25% Discount ) 300,000 MMK
Customer Service Call Centre +959964812301~03.
Sales & Marketing: 09 43085040, 09 5188038, 09 964416603, 09 964812304~09
Announcement for KBZ online banking’s Quick Pay System for YTP’s Monthly Bills
Online Payment Service In an effort to provide you with ease and flexibility for payment of the monthly Internet service Bills, we have implemented an exciting new online payment service. This new service is in partnership with KBZ Bank
Starting from 27th October, 2017 YTP would like to announce that you can pay your monthly Internet service usage bills from the comfort of your home or office using KBZ online banking’s Quick Pay System.
It’s simple, secure and convenient for you.
Please find the detailed instruction for using our online payment channel.
For the customers who would like to pay at KBZ bank’s branches, please bring your monthly invoice with you and pay YTP Bill with Quick Pay System.
There is no additional charge for making payment with KBZ online Banking or with KBZ branches.
YTP Customer Care: 09964812301~03
KBZ Call Center: 09253260087, 09253260091, 092523322845
YTP ၏ လစဉ်ကြေး အင်တာနက်ဘေလ် များကို KBZ Online Banking အသုံးပြု၍ ပေးချေနိုင်ခြင်း
YTP ၏ လစဉ်ကြေး အင်တာနက်ဘေလ် များကို ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့် ရှိသူများ အနေဖြင့် KBZ Online Banking (Quick Pay) အသုံးပြု၍ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ စ၍ ပေးချေနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေငြာ အပ်ပါသည်။
KBZ ဘဏ်ခွဲများတွင်လည်း YTP ဘေလ်ပေးဆောင်နိုင်ခြင်း
ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲများတွင် သွားရောက် ပေးဆောင်မည့် Customer များအနေဖြင့် YTP ၏ Invoice ကို တပါတည်း ယူဆောင်ပေးကြပါရန်နှင့် Quick Pay ဖြင့် YTP Bill ပေးချေမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ်သို့ အကြောင်းကြား ပေးရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
KBZ Online Banking အသုံးပြု၍ ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ များတွင် သွားရောက်၍ ဖြစ်စေ Quick Pay ဖြင့် YTP Bill ပေးချေပါက ဝန်ဆောင်ခ ထပ်မံပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
Online Bill Payment ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲ ရှိပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
YTP Customer Care: +959964812301 ~ 03
KBZ Call Center: ‎‎+959253260087, ‎‎‎‎+959253260091, ‎‎‎‎+959252332845